Izindatshana zikaChloe Smith zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge UChloe Smith
NgoLwesithathu, July 24, 2019 NgoLwesithathu, July 24, 2019 UChloe Smith
Yini ukugxila kwakho kokuqala njengenkampani ye-SaaS? Ukukhula, kunjalo. Impumelelo ye-Skyrocketing kulindeleke kuwe. Kubalulekile ekusindeni kwakho kwesikhathi eside: Ngisho noma inkampani yesoftware ikhula ngama-60% minyaka yonke, amathuba ayo okuba yisigidigidi sama-dollar awadluli ku-50/50. ukukhula kubalulekile ukumboza ukulahleka okuvela ezinkampanini ze-churn SaaS ngokuvamile ezihlangabezana nakho. Ukushaya okulindelwe futhi
Izimpawu zomphakathi zimelela ukuhlangana, okufana nokuphindaphindwa, ukuthanda, kanye namavoti wabasebenzisi bezokuxhumana nomkhiqizo wakho, okukhombisa ukuthandwa kwawo nekhwalithi yezinjini zokusesha. I-Google, i-Bing, i-Yahoo, nezinye izinjini zokusesha zisebenzisa ama-algorithms athile ukuthola isilinganiso semiphumela yosesho. Ithonya langempela lezimpawu zenhlalo kumiphumela yama-algorithms ukuqagela kwanoma ngubani, ngoba ubuchule bezinjini zokusesha buvikelwe ngezivumelwano ezingadaluli. Kodwa-ke, imithombo yezokuxhumana ngokungangabazeki iyona